Ihe ojoo ndi gba ọtọ na Paris: onye okacha amara Pavlensky gbochiri otu oriri - xnxx - TELES RELAY
Ihe ojoo ojoo na Paris: onye okacha amara Pavlensky gbochiri otu oriri - xnxx
ihe ojoo na France - onye nhoputa ndi isi ochichi nke Paris, ezigbo onye mmekorita nke Macron, weputara na nhoputa ndi ochichi mgbe vidiyo a, nke Peter Pavlensky ziputara. Onye omenkà a na-enwu enwu gbapụrụ na Russia ịgbanahụ ndị ọchịchị. Ndị France nyere ya mgbaba, na-ekwenye na ọ bụ onye omenkà a na-amaghị ama ma kwaa ụta. Pavlensky gbara ọkụ n'ọnụ ụzọ Banque de France ma maa ya ikpe ịkwụsị. Gịnị mere o ji kpebie itinye aka ugbu a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị France? Ndi mme mbiet emi ẹkenam ntre?
onye na-ese ihe na-emezughị-eme ihe nkiri Peter Pavlensky, onye nọ na Paris fọrọ nke nta ka echefuru ya, na-echeta ọzọ, na-arụ ọrụ a na-atụghị anya ya dị ka onye na-akwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị, onye na-alụ ọgụ maka ịdị ọcha nke omume na ọha mmadụ France. Na ntanetị, o zipụrụ screenshots nke akwụkwọ ozi nzuzo nke otu n'ime ndị ga-azọ ọkwa nke onye isi obodo nke isi obodo, ezigbo enyi Macron Benjamin Grivot, nna nke ụmụ atọ, nke ọdụdụ bụ erubeghị otu afọ. Okwu doro anya na vidio ndị doro anya, nke ọ bụ n'onwe ya, na-eche banyere otu nwa agbọghọ. Na peeji nke Facebook ya, Pavlensky dere, sị:
“Ọ bụ naanị onye nyocha nke mkpọsa ya niile dabere na nchebe nke ezinụlọ, ụmụaka na ụkpụrụ ezinụlọ ọdịnala. N'ihe edere na nwa agbọghọ, ọ na-ekwu na ezinụlọ na ụmụaka nọ n'ụlọ mkpọrọ. Olee otú ịghọta nke a atuaha? Ma ọ bụ na enweghị nkwekọrịta, na Grivot chọrọ naanị ịbụ onye ntụzi aka nke sel ngọngọ, akpọrọ "Paris"? ".
A manyere Hryvnia ikweta na akwụkwọ ozi ahụ mere. O kwuru banyere eziokwu ahụ na n'ime otu afọ ọ wụsara apịtị ma yie egwu ọnwụ, mana n'ihi na o kpebiri n'isi ụtụtụ ịga ebe dị anya.
“N’ime otu afọ, mụ na ezi-na-ụlọ m atawo ahụhụ site na mkparị, ịgha ụgha, mwakpo na-enweghị aha, hacking nke akwụkwọ ozi na egwu. Ugbu a, ọ gafere ókèala niile. Weebụsaịtị na ibe mmekọrịta mwakpo wakporo ndụ m. Ekpebiri m ịhapụ itinye aka ya na onye isi obodo Paris. "
Ebee ka Pavlos si bịa, onye nwere mmasị na ntuli aka ọchịchị, na ego ole ọ ga-efu, na-echezi akwụkwọ akụkọ French niile ugbu a. N’onwe ya ikwuputa mkpughe dị otú ahụ, ọ gaghị eme ya, n’ihi na ebe a anyị anaghị ekwu maka ịpụ ego ego ọha, na ihe niile na - eme ka ewepụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị n’ọchịchị - azụmahịa nke ya, nke ahụ daa n'okpuru iwu na nchedo ihe nzuzo.
saịtị ahụ, ebe enwere mbipụta, edebara aha na United States na, dị ka ndị ọka iwu Hryvnia si kwuo, na ndị ọrụ Russia. Mana inyo enyo na Pavlensky dị na Russia ga-ezuru oke, nyere ya ndị iwe ya niile ma ka mepee ikpe mpụ. France chebere ya na 2017, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gbara ọkụ n'ọnụ ụzọ Banque de France, kpọrọ oku maka mgbanwe mgbanwe ụwa. A nwalere ya, ya na onye nnabata ya na-ese okwu, natara otu afọ n'ụlọ mkpọrọ na otu afọ na oge ọhụụ. Pavlensky na-anwa ikuzi - o mechara si na asusu. Ugbu a ọ na-agbalị ikpughe, mana ọ bụghị ihe doro anya.
Na France, ahapụghị ndị asọmpi n'ọsọ ahụ, na-ekpughe ndụ onwe onye. Ewezuga, ikekwe, enweghị ike iwere ya dị ka onye isi IMF mbụ Dominique Strauss-Kahn, onye ebubo na iyi egwu. Oge obula ndi oru nta akuko napuchapu ihe ojoo ojoo, ya mere mmeghachi omume nke ndi ochichi bu maka asusu ha na Hryvnia na akwado ya nke uku, agbanyeghi otu ndi ozo.
Karịsịa, Achọrọ m igosipụta nkwado onwe m. Nkesa nke ụfọdụ vidiyo na-enweghị nkwenye dara n'okpuru iwu ntaramahụhụ nke mba anyị ma na-ata ahụhụ site na ịnapụ nnwere onwe nke ihe ruru afọ abụọ. N'ezie, anyị ga-ata ndị mere ntaramahụhụ ahụhụ ", - Mịnịsta na-ahụ maka ihe dị n'ime France kwuru Christophe Castaner.
“Echere m na ikpe ziri ezi kwesịrị ịmata ndị kpatara ya. Ihe profaịlụ nke onye mere ya kwesiri ka akpoo ya. Onye Russia a nke natara mgbaba na France, na-enye onwe ya ụdị aghụghọ ndị a na-akwadoghị. Anyị ga-ahụ ma Mazi Hryvnia gbanwere ", - onye osote National Assembly kwuru, FRas nke ọma, onye isi otu" National Union "mmiri Le Pen.
amanye imeghachi omume na macron. Ọ gwara onye na-agba akwụkwọ m wee sị na ọ na-asọpụrụ mkpebi ya ịga ebe dị anya.
N'ime ndepụta ndị ọkacha mmasị, Hryvnia nọ naanị n'ọnọdụ nke atọ, mana asịrị boomerang a na ndị otu Makron niile. N’ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ahapụlarị ya mmadụ iri na ise n’ụlọomeiwu nta. Agbanyeghị na ọ ka bụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ, na ntuli aka ime obodo, ntuli aka ahụ na-ebu amụma akara dị oke ala.
Isiokwu a pụtara na mbụ http://www.kxan36news.com/pornographic-scandal-in-paris-artist-pavlensky-prevented-the-same-party-rules
Canada - 'RCMP off Wet'suwet'en land': Soldị n'otu na-etolite maka ndị na-agbachitere ala
Onye nyocha Apple na-enye ìhè ọhụrụ na iPhone 12 atụmatụ setịpụrụ